Techzọ Nzuzo nke Gọọmentị Ji Ekpuchido Igwe Igwe Igwe Igwe - OMG Solutions
Uzo eji echekwa nke ndi ochichi iji chekwaa igwefoto igwefoto ahu
Teknụzụ nke na-ahụ maka ahụ abaarala uru dị ukwuu maka gọọmentị n'idebe udo n'etiti ụlọ ọrụ iwu na ndị nkịtị. O meela ụzọ iji mee ka ebe a na-egwu egwu ghe oghe, na-eme ka ọ dị mfe nye akụkụ abụọ ahụ ịrịọ ka a machibido ụlọ ikpe mgbe akụkụ abụọ ahụ na-achọ idozigharị Ọ nwere ike bụrụ na onye uwe ojii jiri ike karịrị akarị na-enweghị nsogbu mgbe ya na nwa amaala na-emekọ ihe, ha nwere ike họrọ ịkpesa ebubo ma emesịa na-enweghị akaebe, ọ na-esiri ha ike inweta ikpe ziri ezi maka mmegbu ahụ. Site na ngwa agha ahụ ndị gọọmentị webatara na usoro iwu ha ji iji ya mee ihe, a ga-anụ olu onye nkịtị na-enweghị ike na ikpe ga-enweta. Inwe igwefoto gburugburu mgbe niile na-eme ka “mmadụ ịmara” ya na ndị mmadụ n'ozuzu ya, ọ na-eme ka ohere ha nwere ịkpa agwa ọ bụla ma ọ bụ mee ya n'ụzọ a na-agaghị anabata nke ọma. Site n’inwe ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka imebi iwu na-eyi igwefoto ka ha na-arụ ọrụ ha, o mere ka o kwe omume ileba anya na ịma ihe onye ọrụ uwe ojii na-eme ma ọ bụrụ na nyocha, enwerekwa egwu ị ga-egwu iji ghọta ọnọdụ ahụ n'ezie. ihe mere n'ezie. Ruo ugbu a onye otu ụlọ ọrụ ahụ, rapara na ụkpụrụ ndị ahụ ma ghara imebi ha-nzuzo, mgbe ahụ agaghị enwe nsogbu ọ bụla na enweghị ihe kpatara mkpu.
Mgbe ihe na - eme na US, ebe ndị uwe ojii gbagburu nwa agbọghọ ojii na-enweghị isi. Ikpe ndị ọzọ ebilitela ma nke a emeela ka mba ahụ nwee arụmụka gbasara ndị uwe ojii. Nke a bụ ihe kpatara esemokwu nke esemokwu ahụ, mmezi nke akparamagwa ndị ọrụ na nchekwa yana kwụsịkwa ebubo ebubo ọnụ nke agbụrụ agbụrụ. Echiche nke iji igwefoto ịdekọ ihe abụghị ihe ọhụrụ dịka okwu n'ezie n'ime afọ iri gara aga, etinyere igwefoto n'ụgbọala ndị uwe ojii naanị iji nwee anya na ihe ha na-eme. Agbanyeghị, ihe omume metụtara ndị uwe ojii na-eyi kamera nke ọma bụ ihe mgbakwunye ọhụrụ, afọ ole na ole gara aga naanị mba ole na ole n'ụwa nabatara ya na steeti ụfọdụ na ógbè ha niile. Mana n’oge na-adịbeghị anya na US 6000 n’ime ihe dị ka ndị uwe ojii 18000 ndị uwe ojii na-eji ya ugbu a, ọnụ ọgụgụ ahụ na-eto n’ike n’ike, atumatu ọhụụ na-aga n’ihu mgbe ndị ochie na-eme mgbanwe, ha niile na-enyere ọha na eze aka ka ha na-arụ ọrụ ahụ. dị mfe maka ndị uwe ojii.
Ngalaba maka nchekwa ala (DHS) mepụtara usoro nyocha na nkwado maka usoro mmeghachi omume mbụ iji jide n'aka site na ọkọlọtọ, ha na-enweta ngwa ahịa a ma gbaa mbọ hụ na ha kachasị. Nkwado ha maka teknụzụ eji eme ihe bụ:
Vidiyo a gha aghaghi etiti etiti 25 opekata mpe (fps)
Batrị nke igwefoto eji arụ ọrụ ga-agba ọsọ ma ọ dịkarịa ala elekere 3 na-enweghị ọnwụ
Mkpebi onyonyo ahụ kwesiri ịbụ opekata mpe nke 480p ntụgharị 640 X 480
Igwefoto ga-enwerịrị opekata mpe otu afọ site ụlọ ọrụ ọ bụla esitere na ya
Nchekwa igwefoto ga-enwerịrị ike ijide ihe eserese nke elekere 3 mgbe etinyere ya na ntọala kacha nta
Igwefoto kwesịrị inwe otu obere ọkụ ọkụ na-enye ohere idekọ ngwa ngwa ọbụlagodi ebe enweghị ọkụ.
Enyere ụfọdụ ndụmọdụ ndị ọzọ gbasara ụfọdụ nsogbu ndị ọzọ akọwapụtara; Ekwenyere na igwefoto ọkọlọtọ ga-enwe ụfọdụ okwu ịmaatụ dịka ọmụmaatụ: foto dị omimi ma na-adịkarị ala. Etu ndị a ma e jiri ya tụnyere igwefoto ọkachamara ahụ adịghị ka ha enweghị isi ebe ọ bụ na etiwo ha ihe ha nwere iji chekwaa na-efu. Enwere ike inwe nsogbu na nkwụsi ike ma ọ bụrụ na onye ọrụ uwe ojii na-achụ ọsọ, ndị a emeela igwefoto isi ka akwadoro maka ebumnuche dịka ndị a ebe isi na-arụ ọrụ dị ka gyroscope nke na-agbazi mmegharị ụfọdụ nke na-eme ka a ghara ịma mma. Uskpali uto nke igwefoto ahụ na-eme ka mmadụ wetaara ọha mmadụ uru dịka:
Ngopụta na mmekọrịta dị n'etiti ike na ụmụ amaala
Ndị ọkachamara na-abawanye ụba ka ndị ọrụ ọrụ na-arụ ọrụ ha n'ụzọ ndị ọzọ nwere ọrụ aka
Mmekọrịta udo nke udo karịa, ndị a na-enwe mmekọrịta dị mma na-enweghị ime ihe ike
Vingchekwa ego ga-emefu na nyocha nke ihe ndị uwe ojii mejọrọ ma na-edozi ikpe metụtara ojiji ọnwụ na-adịghị mkpa
Dika ochoro na nka na uzu igwe komiti abawanyela, otua kwa enwere otutu ajuju banyere ihe eji eme nka karia ma juo ajuju banyere atumatu na-eduzi ya. maka mmemme dị ka nke a, a maara na nkà ịhazi ihe omume dị ezigbo mkpa, ndị na-ahụ maka ọrụ na-eche ụfọdụ nsogbu aka. Ha gụnyere oke nchekwa echere iji nọgide na-echekwa ihe ndekọ ndị a yana mkpa ọ dị iji chekwaa ha nke ọma. Nke a bụ ebe nchekwa igwe ojii na-abata, mana ọ ga-enyocha teknụzụ a. Igwefoto ndị uwe na-eyi na-emetụta ọrụ ndị uwe ojii ndị ọzọ dị ka izipu enyemaka kọmputa na sistemụ ihe njikwa. Ihe ịma aka kasịnụ ọ na-enye bụ ọnụ ahịa nchekwa data nke PERF na-eme ihe dị ka nde dollar 2 kwa afọ.
Na UK na 2006 mgbe akpọbata kamera ahụ mebere anụ ahụ, enwere mgbanwe dị ukwuu n'ọtụtụ ihe na iji ike na-adịghị mkpa ka njide na-agbada site na 60%, teknụzụ ahụ mekwalitere nchịkọta nke siri ike ịgọnahụ ihe akaebe nke kpatara ntakịrị. okwu chọrọ ikpe. Ndị uwe ojii ahụ jiri kamera na-egbochi mmiri, vidiyo e dere ede na agba zuru oke ma nwee ndụ batrị ihe dị ka awa 12. Nsonaazụ mgbe otu afọ site na iji dị ezigbo ọhụụ; nghọta na nka mụbara nke ukwuu, mkpesa ndị uwe ojii megidere na 90%. Nyocha ndị mbụ a dị mma, nyere ụzọ doro na ọmụmụ nke ụkpụrụ yana okike nke iwu nzuzo dị ka ọ ghọrọ nsogbu mgbe a na-ekwu mkpesa banyere mmebi iwu nzuzo. N'ozuzu ya, teknụzụ họọrọ ka eyi eyi agaghị adi arọ, o kwesịrị belata nke ukwuu dịka ọ ga-abụ nsogbu ma ọ bụrụ na ịdị arọ ahụ na-ahụ. A na-eyi kamera ahụ n'akụkụ dị iche iche nke ahụ gụnyere; isi, ubu na obi. Ndị uwe ojii ahụ ga-eme nyocha dị iche iche tupu ha emesịa mata nke dabara na okpu ha na ugogbe anya maka anwụ. Mgbe ị na-eyiri kamera ahụ n’isi, ọ na-edekọ ihe ọ bụla onye uwe ojii na-ele. Ọ dịkwa mma nke ukwuu n'ịchụso ebe isi na-eme dị ka ihe na - ebelata igwefoto, mana ịkwa ubu na obi dị mma na ọ na-edekọ ihe ọ bụla dị n'ihu onye isi ahụ ọ bụrụgodị na ọ naghị ele ya anya. Agencieslọ ọrụ dị iche iche maka inye ụkpụrụ chọrọ igwefoto ka ekwuputa ihe omume ahụ site na ụbọchị na oge ọbụlagodi na ebe ọ ga-ekwe omume, na-enweghị akara ngosipụta vidiyo a enweghị abaghị uru maka nyocha.
Mgbe ngalaba ndị uwe ojii California malitere iwepụta kamera ahụ, ha mere ka ndị ọrụ uwe ojii mata na ihe nkiri 30 nke ndekọ bụ 800mb nke ebe nchekwa. Site na mgbe ahụ gbakọọ ya; ọ bụrụ na ha nwere ndị ọrụ 200 na ha kwesiri ịchekwa n’aka ha, n’ime otu afọ, ha ga-achọ ihe gbasara 33Tb nchekwa. Nke a bụ nke ukwuu ma enwere ike ịgụta igwe na-eyi uwe maka imepụta ọtụtụ vidiyo data yana metadata iji soro ma jikwaa obere vidiyo maka njigide na njigide agbụ. N'ihe banyere ijikọ igwefoto ahụ, amụma ahụ enweghị njikọ na ajụjụ ebe a ga-echekwa nnukwu data. Ntuziaka banyere njigide nwere ike ịme oke nsogbu na mmefu ego nke ekenyela maka igwefoto ahụ nwere. N'ebe ụfọdụ, a na-atụ anya na ọ nweghị data pụtara ìhè ka aga-ehichapụ n'etiti 60-90days. Somefọdụ arịọla ka e bulie ya elu ebe ụfọdụ ndị ọzọ rịọrọ ka e belata ya. Otutu obodo ndi choro imejuputa igwefoto ndi ahu nwere aru ha achoputala nsogbu nchekwa data ha zutere, dika ikike ghapuchara ha ma gbochie ha ibido ihe mmemme a n’agbanyeghi na ha choro ime ya. Justicekpụrụ ikpe obodo ekwuola na vidiyo na-adị mkpa na ngalaba ndị uwe ojii na ọ ga-adị mkpa ịmeghari ndozi nchekwa ahụ.
Teknụzụ igwe ojii abụrụla ihe ngwọta maka nsogbu nchekwa igwefoto ahụ mebere mana mana etinyere ya n'ọrụ ebe ọ na-ezuteghị ozi ọmụma ikpe gbasara okike (CJIS). N'oge ndị na-adịbeghị anya, ọnọdụ ahụ na-agbanwe ugbu a na ụfọdụ ndị dike nke teknụzụ na-enyezi nchekwa igwe ojii nke na-emezu ihe FBI chọrọ nke emezughi na mbụ nke gbochiri mmejuputa ya. Benefitsfọdụ uru nke teknụzụ igwe ojii bụ: scalability, ohere maka ihe okike na ịdị oke ọnụ. Igwe ojii na-ewepụ nsogbu nsogbu nchekwa na mbụ chọpụtara na-eme ka ọ bụrụ nkwụcha ụgwọ iji mee ka arụmọrụ igwefoto ahụ mebere.
Nzuzo 5823 1 Echiche Taa